The Ab Presents Nepal » रवि लामिछानेका दुई चुनौती : पत्रकारले पुग्दैन, नेता बन्न गाह्रो छ !
रवि लामिछानेका दुई चुनौती : पत्रकारले पुग्दैन, नेता बन्न गाह्रो छ !
रवि लामिछाने अहिले जनताको अख्तियारको प्रतिनिधिपात्र जस्तो हुनुभएको छ । बालुवाटारको अख्तियारचाहिँ सीमित मान्छेहरुका लागि मात्रै छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा अन्याय परेका सामान्य मान्छेले अहिले रवि लामिछानेको नाम पहिला लिने अवस्थाको उहाँले छवि बनाइदिनुभयो ।पत्रकारिताभन्दा निकै पर पुगेर एकदम भुइँ तहका जनताको सदभाव जित्ने रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि बनेको छ । अनि, समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश र निराशा मिल्दाखेरि रवि लामिछानेको पक्षमा देखिएको उभार हो यो ।
तर, उहाँलाई पो सबै कुरा थाहा थियो र फ्रस्टेसन थियो त, जनता त कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रति उत्साहित नै थिए । त्यसैले डा. पाण्डेको फ्रस्टेसन र जनताको उत्साहले म्याच खाएन र उहाँको नयाँ पार्टी बनाउने अभियान सफल भएन ।अहिले हामीले बनाएको साझा पार्टी, विवेकशील वा डा. भट्टराईसम्म आइपुग्दा हामीले कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले जतिसुकै बहुमत ल्याए पनि देशमा निकास निस्कँदैन भनेर नयाँ पार्टी सुरु गरेका हौं ।
अब रवि लामिछानेजीजस्तो व्यक्तित्वले यस्ता कुराहरुमा राजनीतिको भुइँमा बसेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा क्षणिक लोकप्रियतामा बहकिएर त्यो तहसम्म यो राजनीति अगाडि जाला भन्ने मलाई लाग्दैन ।रवि लामिछानेको पक्षमा देखिएको जनमतले नेपाली जनता कांग्रेस र नेकपाको विकल्प खोज्न लालायित छन् भन्ने देखाएको छ । तर, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो ।